Difference between revisions of "Edwin Manikai" - Pindula
Difference between revisions of "Edwin Manikai"
(Created page with "thumb|Edwin Manikai'''Edwin Isaac Manikai''' is a Zimbabwean lawyer who co-founded Dube, Manikai and Hwacha. He is also on the board of British Am...")
Latest revision as of 14:30, 3 June 2020 (view source)
[[File:Edwin Manikai.jpg|thumb|Edwin Manikai]]'''Edwin Isaac Manikai''' is a Zimbabwean lawyer who co-founded Dube, Manikai and Hwacha. He is also on the board of [[British American Tobacco Zimbabwe Limited]] as a Non-Executive Director and senior partner at Dube, Manikai and Hwacha. He is the chairperson of the Presidential Advisory Council (PAC) in Zimbabwe meant to advise President [[Emmerson Mnangagwa]].
[[File:Edwin Manikai.jpg|thumb|Edwin Manikai]]'''Edwin Isaac Manikai''' is a Zimbabwean lawyer who co-founded Dube, Manikai and Hwacha. He is also on the board of [[British American Tobacco Zimbabwe Limited]] as a Non-Executive Director and senior partner at Dube, Manikai and Hwacha. He is the chairperson of the [[Presidential Advisory Council]] (PAC) in Zimbabwe meant to advise President [[Emmerson Mnangagwa]].